Kitra-“THB Champion’s League” : miray sokajy ny Jet Mada sy ny Elgeco | NewsMada
Kitra-“THB Champion’s League” : miray sokajy ny Jet Mada sy ny Elgeco
Hanomboka, ny zoma izao, ny dingana voalohany ho an’ny “THB Champion’s League”, taranja baolina kitra. Anisan’ny miray sokajy ao amin’ny “Vondrona Antsirabe” ny tompondakan’ Amoron’i Mania, ny FC AZ. Miaraka amin’izy ireo amin’izany, ny FCV C Vakinankaratra, ny FC Rabaza avy any Atsimo Atsinanana, ny FC Olympique avy any Menabe. Manampy azy ireo ny Jet Mada avy any Itasy sy ny Elgeco Plus. Hifandona avy hatrany amin’ny FC AZ io solontenan’Analamanga io amin’izao andro voalohany izao.
Ankoatra izany, tafita amin’ny dingan’ny 1/16-n-dalana, eo amin’ny fiadiana ny Telma Coupe, Amboaran’i Madagasikara koa ny FC AZ. Nomontsanin’izy ireo tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 3, ny Net Foot, tetsy amin’ny kianjan’ny Carion, omaly. Efa nitarika tamin’ny isa 3 no ho 1 ny solontenan’Amoron’i Mania teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Mbola niampy baolina telo izany teo amin’ny fizaram-potoana faharoa.
Tsiahivina fa tokony ho nifanandrina tamin’izy ireo ny faran’ny herinandro teo tany Ambositra, ny ekipan’ny Stando Disciples. Nazava anefa ny taratasy nalefan’ny federasiona nilaza fa resy ambony latabatra « forfait » ity solontenan’ny ligin’i Vakinankaratra ity, noho ny fitarainana nataon’ny Net foot. Nambaran’ny FMF fa nitombina izany ka nanapahana hevitra fa tafita ny Net Foot ary izao notanterahina izao ny lalao ka nivoahan’ny FC AZ ho mpandresy.